देखेपछि थोत्रो चोली भारीसँग कोही झल्को आउँछ आमाको कुरा कति गरुँ?
‘जे मन लाग्छ, त्यो भन्ने रे’, हेमा छक्क परिन्। उनलाई त हेडमास्टरले पो के के सोध्लान र आफूले जवाफ दिनुपर्ने होला भन्ने लागेको थियो। जे मन पर्छ त्यही कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै उनी यति दंग परिन् कि गफ दिन थालिन्।
नागरिक ६ भाद्र २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
पश्चातापले फर्की आउँदा बाटामा तिमीले जँघार तरेको खोलाको मुहान यै आँखा हो।
नागरिक १ भाद्र २०७७ सोमबार २ मिनेट पाठ
चेपाङ बस्तीमा आगो, हत्यारालाई फूलमाला !
महान काम गरेजस्तो हत्याराको शान हेर, बधशालाको मालिकजस्तो न्यायधिशको इमान हेर।
सुमित्रा बाङ्देल ‘चेली’ २८ श्रावण २०७७ बुधबार २ मिनेट पाठ
नागरिक २७ श्रावण २०७७ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
मोतिलालले वीरगञ्जको फुटपाथमा कयौको फाटेका जुत्ता सिलायो। पालिस दलेर जुत्ता चम्कायो। विडम्बना! गरीबीले फाटेको आफ्नो जीवन कहिल्यै सिउन सकेन। जुत्ता चम्काएभै भाग्य कहिल्यै चम्काउन सकेन।
नागरिक २६ श्रावण २०७७ सोमबार ८ मिनेट पाठ
नागरिक २४ श्रावण २०७७ शनिबार १ मिनेट पाठ
किताबकापी कलम । गर नानी जतन ।जान्नैपर्ने बेला यो । सिक्नैपर्ने बेला यो । बाबाआमा काममा । नजाउ भन्थे गाउँमा ।अरु साथी बोलाउ । घरमै भाइ खेलाउ । पढ्नजाने बेलामा । खाजा बोक झोलामा । रोटी पुवा हलुवा । सेल पुरी माल्पुवा । भुटीमाम समोसा ।
कोरोना लागेको दुई हप्तापछि बुबाआमालाई कोरोनाको असर दखिन छोड्यो । नाक र घाँटीको स्वाब जँचाउँदा पोजेटिभ देखिन पनि सक्छ । चिन्ता नगर्नु केही समयसम्म देखापरे पनि अरुलाई चै सर्दैन । बुबाआमा निको भएपछी शिवम आमासँग लुटपुटिन थाल्यो । हिजोसम्म केही नखाने बच्चा आज त सबैकुरा खान थाल्यो । स्फूर्ति बढेर फेरि पहिलाजस्तै दौडन थाल्यो । बुबाआमालाई के होला भन्ने भयले कस्तो भएको रहेछ विचरा शिवमलाई अदितीले बुबालाई भनिन ।
नागरिक १४ श्रावण २०७७ बुधबार ३ मिनेट पाठ
अमृत भादगाउँले १३ श्रावण २०७७ मंगलबार १२ मिनेट पाठ
नागरिक ११ श्रावण २०७७ आइतबार ३ मिनेट पाठ
वीर पुर्खाले आर्जेको प्यारो देश हाम्रो, जता पनि हरियाली आहा कति राम्रो । प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश, अनेक थरी भाषा हाम्रो अनेक थरी भेष ।
नागरिक १० श्रावण २०७७ शनिबार १ मिनेट पाठ
डुब्न लागेका घाम जस्ता वृद्धा भएका आमाबाबु छोडी तातेताते गर्दै हिँड्ने त्यो सानो बालकको रुन्चे बोलीलाई सम्झिदै रातो टीका अनि फूलको माला भिरेर मुटु भारी बनाउँदै
म जस्ता सानो उमेरका धेरै केटाकेटीहरूलाई कोरोनाका कारण आफ्नोे घरमा मात्र बस्नुपरेको छ । यसरी घरभित्र मात्र बस्नुपरेकोले मलाई आजभोलि दिनहरू बिताउन धेरै गाह्रो भएको छ । अहिले मैले विद्यालय जान पाएको छैन । साथीहरूसँग भेट्न पाएको छैन । साथीहरूसँग खेल्नदेखि आफूलाई मन लागेको ठाउँ घुम्न पाएको छैन ।
नागरिक ९ श्रावण २०७७ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
भीडभाडमा नजाऊ धेरै फोहोर छुनु हुन्न सरसफाइमा ध्यान देऊ कुनै रोगले छुन्न । रसिलो र झोलिलो चीज बढी खानुपर्छ, बाहिरको ‘जंकफुड’ ले धेरै हानि गर्छ ।
हिमालको उज्यालोमा मुस्कुराईरहेको कास्कीको ताङतिङ गाउँमा मीठो खाना र आत्मीय वातावरण पाइन्छ।
अमृत भादगाउँले ८ श्रावण २०७७ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
सानीसानी नानी म किन गाली गरेको किन कुरा नबुझी रिसाउनु परेको ? सबै कुरा कसैले नि जानेको त हुन्न नि जानीजानी तातो आगो कसैले नि छुन्न नि ।
नागरिक ७ श्रावण २०७७ बुधबार ९ मिनेट पाठ
पिङ्कु खुसी भइन्
कम्प्युटरमा पढ्ने भए त बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थिस् नि । सरकारी स्कुलमा पढ्नेले पनि अनलाइनमा पढ्न पाइन्छ । तेरो स्कुलले अनलाइनमा पढाएको छैन । भन्यो दाइले अनि म स्कुल नआएर कहाँ जाउँ ।
नागरिक ६ श्रावण २०७७ मंगलबार १ मिनेट पाठ
अन्यबाट अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्